CC Shakuur oo Weerar afka ku qaaday Sirdoonka Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Siyaasiga mucaaradka ku ah maamulka Farmaajo, Cabdiraxmaan Cabdishkuur Warsame, ayaa weerar dhanka afka ah ku qaadey Hay'adda Sirdoonka iyo Nabad Sugida Soomaaliya [NISA].
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 8 Askari oo kamid ahaa Ciidamadii NISA ee fuliyay weerarkii lagu qaadey Hoyga uu ka degan yahay Muqdisho 17-kii bishii December 2017 ay u goosteen dhanka Al Shabaab.
"Xog aan ka helay NISA ayaa sheegaysa in 8 kamid ah Askartii fulisay weerarkii fashilmay ee Gurigayga Muqdisho sanadkii tagey inay dib ugu biireen Al-Shabaab oo markii ay ka yimaadeen," ayuu yiri CC Shakuur.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku tilmaamay arintan inay caddeyn u tahay sida Hay'adda Sirdoonka dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya u dhexgaleen, islamarkaana u adeegsadaan argagaxisada.
Siyaasigan, oo kamid ah Musharaxiintii la tartamay Madaxweyne Farmaajo doorashadii 8-dii February 2017, marna soo noqday Wasiir ayaa dhawaan ka tegay Muqdisho kadib markii laga qaadey xayiraadii dhanka safarka.
Dowladda Federaalka ayaa lagu eedeeyay inay si gaar ah u bartilmaameedsato Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubnaha katirsan Xisbigiisa, oo qaar isaga uu kamid yahay ay xabsiga dhigtay dhawaan.
Ciidamado xoog ku galay Guriga Senator Cabdi Qeybdiid
Soomaliya 30.12.2017. 13:08
Ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo xoog ku galay Guriga Senator Cabdi Qeybdiid...
Aabaha Ruqiya oo beeniyay inuu Gabadhiisa bixiyay, baaqna u diray DF
Soomaliya 28.09.2018. 23:41